सिड्नीकाे ट्रेनमा च्यापिए ११० जना । एक छिनकाे हतारले ज्यानै जाला है ! « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » News » सिड्नीकाे ट्रेनमा च्यापिए ११० जना । एक छिनकाे हतारले ज्यानै जाला है !
सिड्नीकाे ट्रेनमा च्यापिए ११० जना । एक छिनकाे हतारले ज्यानै जाला है !
Nepaltube Australia Published On :6December, 2018
सिड्नीकाे ट्रेनकाे बन्द हुनै लागेकाे ट्रेनकाे ढाेकामा हात चेपिएकाे यात्रु । तस्बिर- सिसिटिभी
ट्रेन गुडेछि ढाेकामा चेपिएकाे हातसहित लतारिदै यात्रु । तस्बिर- सिसिटिभी
भाग्यवस चेपिएकाे हात फुस्किपछि लडेका यात्रु तस्बिर- सिसिटिभी
सिड्नी/डिसेम्बर ७, केही दिनअघि सिड्नीकाे सेभन हिलमा गुड्नै लागेकाे ट्रेनमा चढ्न खाेज्दा ढाेकामा चेपिएर एक युवा घाईते भए ।
धन्य ! समयमै ढाेकामा चेपिएकाे उनकाे हात निस्किएकाले ट्रेनले धेरै परसम्म लतारेर लान पाएन र उनकाे ज्यान जाेगियाे । ट्रेनकाे ढाकाे बन्द हुनै लाग्दा दाैडिएर आएका ती युवाले हात छिराएर खाेल्न खाेज्दा हातै चेपिएकाे थियाे ।
याे त एउटा प्रतिनिधी घटना मात्र हाे । सावधानी नअपनाउदा सिड्नी ट्रेनमा यस्ता घटना दिनहु बढिरहेकाे छ । सिड्नी ट्रेनका अनुसार अप्रिल २०१७ देखि अगष्ट २०१८ सम्म मात्र हतारमा रेल चढ्न खाेज्दा ११० जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै ४१ जनाकाे हात र खुट्टा रेलकाे ढाेकामा च्यापिएकाे सिड्नी ट्रेनले जनाएकाे छ ।
लिफ्टकाे ढाेका जस्ताे हात र खट्टा छिएर ट्रेनकाे ढाेका खुल्दैन ।
खासगरि कार्यलय जानेबेला हतार हतार ट्रेन चढ्न खाेज्दा यस्ता घटना भएका छन् । ढाेका बन्द गरेर गुड्नै लागेकाे ट्रेनमा दाैडिएर चढ्नु गलत भएकाे यातायात मन्त्री एन्ड्रे कन्सट्यान्स बताउछन् । ‘यसरी दाैडनु गलत हाे’ उनी भन्छन् – ‘केही बेरकाे हतारले अंगभंग र ज्यानै समेत जान सक्छ’ ।
हामी बन्द हुदै गरेकाे लिफ्टकाे ढाेका हात र खुट्टा छिराएर खाेल्छाै । तर, जानकारहरु लिफ्ट र ट्रेनकाे ढाेका एउटै नभएकाे बताउछन् । लिफ्टकाे ढाेका जस्ताे हात र खट्टा छिएर ट्रेनकाे ढाेका खुल्दैन । सिड्नी ट्रेनका स्टेवाट मिल्छ भन्छन् – एउटा बिन्दुमा पुगपछि ट्रेनकाे ढाेका फेरि खुल्दैन ।
जति हतार भएपनि दाैडिएर ट्रेन नचढ्न अधिकारीहरुले सुझाएका छन् । ‘तपाईकाे गन्तव्यसम्म हामी जसरी पनि पुर्याउछाै’ – मिल्स प्रश्न गर्छन्- केही मिनेटमै अर्काे ट्रेन आईहाल्छ नि ज्यानकै बाजी थापेर किन हतार गर्नुहुन्छ?
निरन्तर बन्दाबन्दी, न्यु साउथ वेल्समा १०२३ र भिक्टोरियामा ६०३ जना…
ब्रिजबेन, अष्ट्रेलिया । न्यु साउथ वेल्स राज्यमा पछिल्लो २४ घण्टामा